Ogaden News Agency (ONA) – War degdeg ah – Ciidankii gumaysiga ee Mina oo cagta la mariyay
War degdeg ah – Ciidankii gumaysiga ee Mina oo cagta la mariyay
War hadda naga soo gaadhay Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa naloogu sheegay in shalay oy taariikhda ahayd 09-01-2013 weerar ay ku qaadeen CWXO ciidanka gumaysiga oo ku sugnaa Mina ay gabaiahaanba gacanta ku dhigeen goobtii halkaasoo ay hub farabadan kaga furteen cadawga, waxayna gacanta ay ku dhigeen oo nolol lagu qabtay 4ar askari oo la baadhayo.
Waxaa sidoo kale uu dagaal xoogan ka dhacay duleedka Galaalshe halkaasoo kamiin loo dhigay cadawga ka dibna weerar lagu qaaday. Waxaa cadawga lagaga dilay goobtan 40 askari oo darajooyin kala duwan leh iyadoo dhaawaca uu aad uga badan yahay intaa. Waxaa laga furtay cadawga 30 qori, rasaas iyo baagag.
Dagaal isagana ka dhacay 30-12-12 Rooxaale oo ka tirsan degmada Segag ayaa waxaa cadawga lagaga dilay 10askari oo ah intii la’si dul taagay, waxaana laga furtay 10 qori iyo rasaas badan. Waxuu warka intaa ku daray inuu dhaawaca cadawga aad u badan yahay.
Dagaaladii dayrta ayaa dhamaan gobolada ka socda oon idiin soo tabin doonaa kolba warbixinada naga soo gaadha xarunta dhexe.